Wararka - cadee mas'uuliyadaha, xooji mas'uuliyadaha, abuurna faa'iidooyin
Cadee mas'uuliyadaha, xooji mas'uuliyadaha, abuurna faa'iidooyin
Qiimeynta waxqabadka aqoon-isweydaarsi kasta waa mid ka mid ah tallaabooyinka shirkadda iyo isku day muhiim ah oo ku aaddan dib-u-habeynta mushaarka shirkadda. Waa habka kaliya ee si wax ku ool ah loo yareeyo kharashka loona hagaajiyo tartanka shirkadda. Qiimaha alaabta ceeriin ayaa si aad ah kor ugu kacay, korontada iyo biyo la'aantuna waxay si ba'an u carqaladeeyeen shirkadaha. Waa inaan go'aan ka gaarnaa si aan u qabanno shaqo wanaagsan oo ku saabsan qiimeynta waxqabadka aqoon isweydaarsiga isla markaana aan kor u qaadno waxtarka aqoon isweydaarsiga si ay shirkaddu u hesho waddo looga baxo. Qorshaha qiimeyntu wuxuu dejiyaa saddex ujeeddo: yoolal aasaas ah, yool qorsheysan, iyo yool la filayo. Bartilmaameed kasta, tilmaamayaasha heerka koowaad sida wax soo saarka, qiimaha, iyo macaashka waxay ku xisaabtamayaan 50%, iyo bartilmaameedyada maareynta sida tayada, wax soosaarka nabdoon, isbeddelka tikniyoolajiyadda, iyo koontada wax soo saarka nadiifka ah ee 50%. Marka yoolka la dejiyo, agaasimayaasha aqoon isweydaarsiga waxaa laga codsanayaa inay si adag u shaqeeyaan.
Shirkaduhu si ay u horumariyaan mustaqbalka fog, waa inay ku tababartaan xirfadahooda gudaha, fiiro gaar ah u yeeshaan maaraynta, isla markaana siiyaan miisaan isku mid ah wax soo saarka iyo tayada. Isku darka labada dhinac looma eexan karo. Dhamaan agaasimayaasha aqoon isweydaarsiga waa inay ku sameeyaan si qumman, u qaataan tixgelin kasta oo qiimeyn ah, aqbalaan imtixaanka shirkadda, oo ay dejiyaan nidaam magdhow ku habboon.
Qiimeynta waxqabadka sanadlaha ah ee agaasimaha aqoon isweydaarsiga ayaa ah unug xisaabeed kooban oo isku daraya daaweynta iyo qiimeynta waxqabadka si shaqada agaasimaha aqoon isweydaarsiga ay u noqoto mid cad oo faa iidooyinka u leeyihiin si toos ah, si loo kordhiyo xamaasadda shaqada iyo waxqabadka shirkadda Waxaan rajeynayaa in iyadoo si joogto ah loo hagaajiyo nidaamka qiimeynta waxqabadka, waxaan xaqiijin karnaa in himilooyinka sanadkan si guul leh loo dhameystiray. Waxaa la rajeynayaa in agaasimaha aqoon isweydaarsiga uu si wanaagsan uga faa'iideysan karo ilaha hogaamiyaha kooxda iyo shaqaalaha isla markaana uu si adag u shaqeeyo si xaalad cusub loogu abuuro shaqada.